Sebephila ngokunukelwa indle e-France | News24
Sebephila ngokunukelwa indle e-France
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaEsinye sezitamukoko ezigcwele esesize sambozwa.
AMALUNGA omphakathi ase-France e-Phase 1 athi ukuhlala nephunga lendle elingabekezeleki sekuphenduke isinkwa semihla ngemihla kubona njengoba ingekho into abangayenza ngaloko.
Lokhu kungenxa yokugcwala kwezitamukoko zezindlu zangasese ezisendlini abazisebenzisayo nabathi sekuphele isikhathi eside imoto yakamasipala uMsunduzi ingafiki ukuzomoma ukuze kuzophunguka kunciphe nephunga.
Lo mphakathi uthi awusazi ukuthi wenze njani kanti amanye amalunga athi wona sekuze kwawaphoqa ukuba uzivale lezi zindlu zangasese ungazisebenzisi ngoba ubalekela ukuthi indle ingaze iphumele ngaphandle emabaleni abo igcwale khona.
Elinye ilunga lomphakathi elibhekene nalenkinga uMnuz Smanga Mtshali utshele i-Echo ukuthi kubo sebeze banquma ukuthi bangayisebenzisi nhlobo indlu yangasese ngoba isitamukoko sayo sigcwele. Uthe bazama ukuthola imoto yakamasipala ukuba izobamomela kodwa umshayeli wayo wabatshela ukuthi angeke aze akwazi ukuza kubona ngoba umgwaqo muncane.
“Sesisizwa omunye ugogo wakamakhelwane onendlu yangasese yomgodi nokuyiyona asivumela ukuthi siyisebenzise ngoba eyethu igcwele. Siphila kabuhlungu ngoba asazi ukuthi siyokwenza njani mhlazane kuthiwa nalena indlu kagogo nayo iyagcwala. Into esixakayo ngemoto lena emomayo ukuthi yake yafika ngaphambilini kodwa manje sesitshelwa ukuthi imoto angeke ikwazi ukungena ngoba umgwaqo mncane, ekuqaleni kanti yayingene kanjani uma ingeke isakwazi ukungena manje? Asisazi manje ukuthi kumele senze njani sididekile,” kubeka yena.
Elinye ilunga lomphakathi elingathandanga ukudalwa igama lithe ukuhlala nephunga lendle sekuyinto yabo yamihla ngemihla futhi sebedelile ukuthi kusho ukuthi iyona indlela abazophila ngayo lena.
“Sonke sinenkinga yokugcwalelwa ilezi zindlu zangasese wonke umuntu njengoba sesize savala izitamukoko. Abanye abantu bona sebeze banquma ukuthi bawavale qobo angasebenzi. Uma like lanetha nje sihlalele ovalweni ukuthi linganethi kakhulu ngoba uma like lanetha kakhulu indle igcina isiphumela ngaphandle ngesikhathi isitamukoko singenwa amanzi bese kunuka into ongakaze uyibone,” kubeka yena. Ngesikhathi i-Echo ihambele le ndawo ngoMsombuluko mhla zingama-21 kuMasingana (January) ihlangatshezwe iphunga lendle nokuthiwa liphuma ezitamukokweni ezigcwele kule ndawo. Umphakathi uthi nakuba kunzima ukuphila ngaphansi kwalesi simo uyazama ukubekezela ngoba akukho lapho uzobalekela khona.
Ikhansela lakundawo uNkk Sibongile Mncwango uthe uyayazi lenkinga ebhekene nomphakathi wathi futhi akusiyona nje indawo yase-Phase 1 kuphela kodwa France yonke kanye naseDenmark.
“Sinemoto eyodwa kuphela umasipala asinikezela yona ukuba imome uma ngabe sekugcwele kodwa inkinga enkulu ukuthi ziningi izindawo ezinalenkinga kanti futhi zonke zinkulu. Iyangikhathaza kakhulu le ndaba ngoba le nkinga kade yaqala kusakhona amakhansela amadala. Singakujabulela nje uma ngabe umasipala ungakwazi ukuthi usandisele izimoto ezimomayo ngoba kunzima njengoba kukhona imoto eyodwa kuphela,” kubeka yena.
Ube esenxusa umphakathi ukuba uma ngabe ubona ukuthi kunabantu asebenezimo ezingasagwinyisi mathe bamthinte ukuze kuzokwazi ukuthi imoto iphuthunyiswe kuyena.
“Imoto emomayo isiqede masonto amathathu ihleli e-Phase 3 nengithe uma ngibuza kubaphathi bayo kamasipala ukuthi kungani ihleli isikhathi eside kangaka endaweni eyodwa bangitshela ukuthi basazophenya. Uma kunganabantu abanezimo ezimbi kakhulu sizozama ukuthi kuphuthunyiswe imoto kubona kuqala ngoba njengoba sekuyihlobo kusazoba kubi uma sekunetha izimvula zingena ezitamukokweni ezigcwele,” kubeka yena.